Wararkii ugu dambeeyay xaaladda degmada Ceelwaaq iyo cidda rasmiga ah ee haatan gacanta ku haysa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay xaaladda degmada Ceelwaaq iyo cidda rasmiga ah ee haatan gacanta ku haysa
Wararka ugu dambeeyay ee laga helaayo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in saakay xaalada degmadaasi ay dagan tahay, iyadoona degmadaasi ay dib ugu soo laabteen ciidankii dowladda federaalka Soomaaliya oo maalintii shalay isaga baxay halkaas.
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab islamarkaana aad u hubeysan ayaa gelinkii dambe ee shalay la wareegay gacan ku heynta degmada Ceelwaaq, waxaana la sheegay in habeenkii xalay ay isaga baxeen guud ahaan degmadaasi oo gacantooda ku jirtay mudo saacado ah.
Ciidamo katirsan militeriga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saakay dib ugu soo laabtay, waxayna ciidamadaasi wadaan howlgalo ay ku baadi goobayaan xubno katirsan dagaalyahanada Al-shabaab ay ka cabsi qabaan inay ku hareen magaalada.
Mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda oo lagu magacaabo Warfaa Sheekh Aadan ayaa warbaahinta u sheegay in xaalada degmada Ceelwaaq ay maanta tahay mid dagan , wuxuuna sidoo kale sheegay in ciidamo katirsan dowladda ay haatan gacanta ku haayaan degmadaasi.
Dhinaca kale, dagaalyahandii Al-shabaab ee isaga baxay degmada Ceelwaaq ayaa la sheegayaa inay haatan ku sugan yihiin duuleedka degmadaasi, waxaana dadka degmadaasi ay ka cabsi qabaan in mar kale ay dib usoo laabtaan islamarkaana uu halkaasi dagaal kale ka dhaco.